Wararka - Kaihua Mould's 2021 “Hagaajinta Maareynta Dijital ah” Kulankii Abaabulka iyo “Amarka Milatari ee Bartilmaameedka Istiraatiijiga ah” Shirka Dhaarta si weyn ayaa loo qabtay
Shirka Abaabulka Kaihua Mould ee 2021 “Horumarinta Maareynta Dijital ah” iyo “Amarka Milatari ee Bartilmaameedka Istiraatiijiga ah” Shirka Dhaarta si heer sare ah ayaa loo qabtay
Bishii Maarso 2-3, 2021, Kaihua Mold "Isuduwaha Maareynta Dijital ah" Shirka Abaabulka iyo dhaarta "Istaraatiijiyadda Bartilmaameedka Milatariga" ayaa lagu qabtay Xarunta Huangyan iyo Warshadda Sanmen. In ka badan 1000 shaqaale ah ayaa ka soo qayb galay kulanka.
Shirka Abaabulka "Horumarinta Maareynta Dijital ah"
Bilowgii kulanka, Guddoomiye Liang Zhenghua ayaa kula wadaagay:
Sanadka 2020-ka, waaxyaha kala duwan ee labada warshadood ee Huangyan Sanmen waxay diirada saari doonaan fikirka hagaya ee "tayo sare, hufnaan sare, iyo wareeg gaaban", kaas oo ka dhaqan galaya mashruuc kasta oo guuleysta, waxayna ku ifin doonaan abaalmarino sharaf.
Amarada sanadka 2020 waxay kordheen 40.37% sanad-sanad
Qiimaha waxsoosaarka 2020 wuxuu kordhay 13.77% sanad-sanad
Wadar ahaan kiisaska horumarinta 668 KMS
Wadar ahaan 1184 kiisaska horumarinta KMVE
2021 waa Kaihua sanadka horumarinta maaraynta dhijitaalka. Dhammaan waaxyaha waa inay diiradda saaraan horumarinta tayada sare leh, si guud u hagaajiyaan maareynta dhijitaalka ah ee shirkadda, oo ay u dhammaystiraan tilmaamayaasha sanadka 2021, ayna gaaraan shanta sharuud ee soo socda:
1. Waa inuu ku adkeysto tayada marka hore
2. Waa inuu noqdaa mid macaamiil ku dhisan oo macaamiisha siiya xalal nidaamsan
3. Kharashka shirkadda iyo kharashkeeda waa in la dhimaa
4. Heerarka waa in loo hoggaansamo
5. Waxaa lagama maarmaan ah in la wanaajiyo heerka xog-ogaalnimada iyo in la dardar geliyo horumarinta dijitaalka
Shirweynahan ayay shirkaddu ku amaantay wadajirka muuqda iyo shaqaalihii aadka u fiicnaa ee ay soo xusheen waaxyaha kaladuwan ee sanadka 2020. Wadar ahaan 5 abaalmarin wadareed iyo 11 abaalmarino shaqsi ah ayaa la gudoonsiiyay, wadar ahaan 54 shaqaale ah ayaa qaatay masraxa si ay u helaan abaalmarinta.
Ajendaha labaad ee shirkan waa soo saarista kulanka dhaarta "istiraatiijiyadda bartilmaameedka militari".
Ku-xigeenka fulinta ee shirkadda iyo maareeyayaasha waax kasta waxay dhaarteen oo mid mid u kala saxeexdeen amarro milateri, ka dibna Guddoomiye Liang Zhenghua ayaa caleemo siiyay waax kasta.
Durbaankii dagaalka ayaa dhawaqay, waxaana la dhigay amarkii militariga. Amarka militarigu waa hadafka, laakiin sidoo kale ballanqaadka. Dhamaan shaqaaluhu waxay si xilkasnimo la'aan ah u qaadi doonaan masuuliyada garbahooda isla markaana ku fulin doonaan ficillo, sidaa darteed ereyadu waa inay ahaadaan ficil, ficilkuna waa inuu noqdaa mid xalin!
Soo Saarista "Amarka Milatari ee Ujeeddada Istiraatiijiga ah" Shirka Dhaarta
Jiilaalku wuu dhammaaday, galaasku waa dhalaalayaa
Mahadsanid qoyska Kaihua
Sanadka 2020, waxaan ku wada jiri doonnaa isla doon, gacmahana isqabsan
Waxaan sii wadaynaa sanadka 2021
Ha iloobin ujeedkii asalka ahaa oo horay u sii wad geesinimo